Suxufiga Iyo Saxaafaddu Waa Kuwama? – Geeska Afrika Newspaper | Hargeisa, Somaliland
Suxufiga Iyo Saxaafaddu Waa Kuwama?
Wargeyska Geeska Afrika, wuxuu akhristayaashiisa halkan ugu soo gudbinayaa maqaal uu Abwaanka caanka ah ee Maxamed Ibrahim Warsame (Hadraawi) saxaafadda iyo suxufiga ka qoray sannadkii 2008, qormadaas oo uu wakhtigaas abwaanku kula dabaal degayay wargeyska Geeska Afrika oo 2 jirsaday 17 April 2008.
Wargeyska Geeska Afrika waxa la aasaasay 17 April 2006, waxaanu maanta noqday siddeed jir. Qormadaas uu Hadraawi wakhtigaas qoray oo ahayd mid xiiso badan, ayuu Wargeyska Geeska Afrika maanta dib ugu soo gudbinayaa akhristayaashiisa, maadaama oo ay tahay qormo miisaankeedu culus yahay. Waxaanu ku bilaabay sidan, “Marka hore waxaan salaan kal iyo laab ah qoraalkan ugu gudbinayaa hurinta wargeyska Geeska Afrika, oo maanta (17 April 2008) xusaya sannadguuraddii labaad ee ka soo wareegtay maalintii uu soo ifbaxay. Sidoo kale waxaan baaq guubaabin iyo dhiirigelin ah u jeedinayaa ciidanka warbaahinta ee dalka, anigoo xusuusinaya inay sii xoojiyaan dedaalkooda joogtada ah ee ay u banbaxeen. Dhanbaalkani wuxuu dhallinyarada Geeska Afrika kala qayb geliyaa xafladda munaasibadda-sheegan, kadib markii ay suurogal ii noqon wayday inaan ka muuqdo goobta iyo golaha lagu xusayo wargeyska, sababa kedis ah oo soo dhexgalay qorshahayga darteed.
Warbaahinta, gaar ahaan saxaafadda madaxa banaani meel ay joogtaba waa iftiin iyo ileys horseed ka ah nolosha ummadi leedahay, majaraha ay ku socoto iyo abaarta ay ku jahaysan tahay. Saxaafadda wax ku oolka ahi waxay sawirtaa eel qarsoon iyo lama aragta kowda ah. Waa jeedal qac kulul oo ka qaylisiiya layliga biyaha kashiisa ku jira ka didaya. Arrin kasta oo saxaafaddu soo bandhigayso waxay u soo bandhigtaa hab iyo hanaan, hubsiino, miyir iyo miisaan ku dheehan yahay. Waxay soo bandhigtaa wakhtiga ku habboon. Waxay raacisaa talooyin iyo tusmooyin. Waxay ka digtaa waxyeellada ka iman karta iyo saamayntiisa.
Meel kasta iyo maamul jiraba, waxay u qaybsan tahay inay isha ku hayso. Waajibaadkaa halista ah saxaafaddu waxay ku heshaa sumcad, magac iyo maamuus. Waxa kordha miisaanka ay leedahay iyo taxgelinta la siinayo. Waxay hoysataa kalgacalka ummadda, taasina waxay dhalisaa inay hesho cudud miiggan oo dhan walba ah – ay ku tiirsato oo isku kalsoonideeda xoojiya. Waa qalab feejig oo lafaha hoose iyo xaajo dabool adagi saaran yahay qaawisa. Waa qalab cid walba ku tola inay dhabaha toosan raacdo oo layska ilaaliyo. Haddana, saxaafaddu mar walba ma aha sidaas. Inay sidaas noqotaa waxay ku xidhan tahay shuruudo badan iyo arrimo asaasi ah oo ay tahay inay jiraan.
wuxuu leeyahay aragti, abaar sugan, mabda, aqoon guud, aqoon gaara oo uu ku jahaysan yahay.
cid walba wuxuu kaga adag yahay, ku dhac iyo badheedhe
Waxa uu hay’adda shaqada tooska ah ku leh la ilaaliyaa mabaadiida iyo shuruucda guud ee dalka u taal, wuxuu ilaaliyaa dhaqanka suubban, anshaxa iyo asluubta ummadi leedahay.
Waa inuu leeyahay miyir iyo miisaan ilaaliya hawlihiisa
Waa inuu ka fayow yahay oo ka madax banaan yahay, balwooyinka iyo aafooyinka camalka dhaawaca ama dib u dhiga.
Waa in aannu mabda ka dhigan xasaradda, xeerjajabka iyo dhinac u janjeedhka guracan ee dhabbada sugan ka leexinaya.
Waa inuu leeyahay hibooyinka qurxisa hawshiisa, sida aftahamada iyo farshaxanimada.
Waa inuu si xeeldheer oo kala qalan u yaqaan luuqadda uu wax ku qorayo, ama ku tebinayo
Waa inuu asturan yahay dhinaca hiyiga iyo haynta
Waa inuu ka nabad qabaa qarqarsiga iyo qafaalashada xasiloonida qaadda.
Waa inuu ka tirsan yahay meelo xaqiisa ilaaliya oo ku gudban ama gaadh-haye ka ah.
Marka horeba waa in saxaafaddu ka soo jeeddaa – ummadda iyo waayaheeda
Waa in xilka saxaafaddu yahay toosin iyo talo bixin,
Waa inay xambaarsan tahay nuxur iyo mug marba marka ka dambaysa isa soo tara.
Waa inay tahay mid kaydisa dhacdooyinka maalmaha.
Waa inay isku xidho dalka iyo beesha caalamka
Waa inay iska wada gufayso gododka bahalo galeenka ah iyo cid kasta oo taqaanna garab ku daaqa.
Waxay yeelataa cadow fara badan, oo colaaddiisu ka soo jeeddo dano gaar ahaaneed iyo gurac wax ku doon
Laakiin, waa inay ku tiirsan tahay shacbiyad, cudud iyo ciidan ka fara badan cadowgeeda.
Waa inay difaacdo xoriyadda iyo xuquuqda muwaadinka
Waa in dadku hiil iyo hoo la barbar taagan yahay.
Waa in dowladdu ixtiraam iyo xoojin la garab taagan tahay.
Waa inay ka madax banaan tahay masalooyinka reebban.
Waa inay leedahay sharciyad, urur iyo ururro ilaaliya